အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူရေးအတွက် အိန္ဒိယ - မြန်မာဆွေးနွေး - People Media Myanmar
Home အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူရေးအတွက် အိန္ဒိယ – မြန်မာဆွေးနွေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူရေးအတွက် အိန္ဒိယ – မြန်မာဆွေးနွေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Serum Institute of India မှ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူရေးနဲ့ပတ် သက်ပြီး အိန္ဒိယ-မြန်မာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများဝယ်ယူရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးသည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄)၊ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးများ အထူးသဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ပဋိဇီဝဆေးဝါးများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးရန်ကိစ္စတို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ၌ တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စ၊နေပြည်တော်တွင် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် အဆင့်မြင့်ဆေးရုံကြီးတစ်ခုထူထောင်ရေး အမြန်ဆုံး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များပါဝင်သည်။
အလားတူ အိန္ဒိယအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ချင်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ (၁၆) နေရာတို့တွင် အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် (၁၆) စီး ထောက်ပံ့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်သည်။
#PeopleMedia #အိန္ဒိယ #မြန်မာ #COVID
အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ထုတျလုပျသညျ့ COVID-19 ကာကှယျဆေးမြား ဝယျယူရေးအတှကျ အိန်ဒိယ – မွနျမာဆှေးနှေး
အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ Serum Institute of India မှ COVID-19 ကာကှယျဆေးမြားကို မွနျမာနိုငျငံမှ ဝယျယူရေးနဲ့ပတျ သကျပွီး အိန်ဒိယ-မွနျမာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံထုတျ COVID-19 ကာကှယျဆေးမြားဝယျယူရနျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှငျ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာ မွငျ့ထှေးသညျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ ရုံးအမှတျ (၄)၊ နပွေညျတျော၌ တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာ၌ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ဆေးဝါးမြား အထူးသဖွငျ့ အရညျအသှေးပွညျ့ဝသညျ့ ပဋိဇီဝဆေးဝါးမြား ထုတျလုပျရနျအတှကျ မွနျမာနိုငျငံမှ ဆေးဝါးထုတျလုပျရေးစကျရုံမြား၊ ကုမ်ပဏီမြားနှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ဆေးဝါးထုတျလုပျရေးကုမ်ပဏီမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားအတှကျ ခြိတျဆကျပံ့ပိုးပေးရနျကိစ်စတို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနက သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။
အဆိုပါ ဆှေးနှေးပှဲ၌ တိုငျးရငျးဆေးပညာ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ကိစ်စ၊နပွေညျတျောတှငျ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးအဖွဈ အဆငျ့မွငျ့ဆေးရုံကွီးတဈခုထူထောငျရေး အမွနျဆုံး ဆကျလကျ ဆောငျရှကျမညျ့ကိစ်စရပျမြားပါဝငျသညျ။
အလားတူ အိန်ဒိယအစိုးရသညျ မွနျမာနိုငျငံရှိ ခငျြးပွညျနယျရှိ မွို့နယျနှငျ့ မွို့နယျခှဲ (၁၆) နရောတို့တှငျ အရေးပျေါလူနာတငျယာဉျ (၁၆) စီး ထောကျပံ့နိုငျရေး ဆောငျရှကျလကျြသညျ။
#PeopleMedia #အိန်ဒိယ #မွနျမာ #COVID
« ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ နယ်စပ်တွင်သေဆုံးမှုအများဆုံးအဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ရပ်တည်နေ
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၌ မြေကြွက်များကို မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၂ ဦး ဦးဆောင်၍ ရှင်းလင်းရာ ကြွက်ကောင်ရေ(၁၂၀)ရရှိ »